घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू Virgil van Dijk Childhood Story Plus Untold Biography Facts
एलबी पूर्ण फुटबल स्टार को प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नाम निकनाम भनिन्छ; 'विग'। हाम्रो Virgil वान Dijk Childhood Story plus जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपन समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन, सम्बन्ध जीवन र उनको बारेमा धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर कम से कम हाम्रो Virgil वान Dijk जीवनी विचार गर्ने एकदम रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Virgil van Dijk Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
विर्जिल वान डिजिक जुलाई, एनएनएक्सएक्सको 8th दिन ब्राया, नीदरल्याण्डमा जन्मिएको थियो। उहाँ जन्मेको क्यान्सर हुनुहुन्छ। तिनी डच ड्यादर (रे भ्यान डाइके) र सुरिनी आमा (रूबी वान डाइक) मा जन्मिएका थिए। भाइबिलले आफ्नो बुबाको विपरीत उनको सुन्दर आमा जस्तो धेरै देखिन्छ।
सुन्दर जन्मे Virgil विलियम II मा आफ्नो क्यारियर किकस्टार्ट गर्न को लागि केहि प्रयास पछि असफल भयो।
उनी धेरै ढिलो र सानो समझाएको थियो। यो उनको खतरनाक पेट को अनुपस्थिति को कारण अस्पताल मा अस्पताल ले जा रहेको थियो पछि। निशानहरू अझैसम्म उनीहरूको निचोडमा तीव्र मितिमा प्रस्तुत गर्दछ।
सौभाग्य देखि उनको लागि, उनले आफ्नो पेट र विकास जटिलताओं देखि बरामद गरे। भाइबिलको फिटनेस र रिकभरी पछि वृद्धि धेरै अत्यधिक भयो। आफ्ना आमाबाबुलाई यो चमत्कार थियो। यसले आफ्नो क्यारियरको लागि सफल सुरु गर्यो।
Virgil आफ्नो गृहनगर मा 255 किमी यात्रा गर्यो Breda लाई ग्रोनिङजेन जसले उनलाई फुटबलमा पहिलो पटक दिएको थियो। एक पेशेवर खेलाडी बनेपछि, उहाँले 2013 मा केल्टिकमा जानुभयो, जहाँ उनले स्कटिश प्रिमियरशिप जीता। उनी आफ्नो मौसममा दुवै वर्षको पीएफए ​​स्कटल्याण्ड टोलीमा नाम दिइएको थियो, पछि पनि स्कटिश लीग कप जित्यो।
सेप्टेम्बर 2015 मा, उनले सामेल गरे साउदाम्पटोन। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Virgil van Dijk Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
लामो समयसम्म सम्बन्ध छनौट गर्ने क्रममा, भाइगिल एक महिलाको लागि गएकी थिइन् जो उनको विश्वास छ कि अवफादार हुनको लागी कमजोरी हो र पनि, जो कि सबैले उनीहरुसँग सबै परिस्थितिमा खडा हुनेछ।
भाइगिल र उनको प्रेमिका रिकी एकै उमेर र देशको हो (नेदरल्यान्ड्स)। तिनीहरू आफ्नो बचपनको समयबाट डेटिङ गर्दै छन्।
Virgil र उनको जीवन को प्रेम, रिकी Nooitgedagt
राइक्स नुइटेटेडगल्टले एक पटक रहेको छ जसले विलियम II मा आफ्नो समयबाट नयाँ जीवनमा बसोबास गर्ने भाइबिललाई सहयोग पुर्याएको छ। उनी आफ्नो उच्च-संचालित नौकरी दिन स्कटल्याण्ड र बेलायतीमा आफ्नो जीवनको प्रेम उत्प्रेरित गर्न श्रेय दिइएको छ।
एक पटक साक्षात्कारमा एकपटक यसो भन्यो: "म चिन्ता छुबिक्री प्रबन्धकको रूपमा केडीई र ह्यान्ड्यान्डमा स्टोरहरूमा विभिन्न फेसन-ब्रान्ड बेचे। मैले यसलाई माया गर्थे तर मेरो पाहुनालाई पछाडि पछाडि फर्काउन थालिन्। अहिलेसम्म, हामी राम्रो तरिकाले बसिरहेका छौं र हाम्रो सुन्दर कुकुर संग साहसिक कार्य गर्दछौं। "
Virgil, राइक र तिनीहरूका प्यारा कुकुर
रक्सी अहिले पूर्ण-समय फुटबल महिला र वाग हो। हालैमा, विगिलले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो रोमाञ्चकीय पक्षमा रोमाञ्चक पक्ष प्रकट गरे। उनले तिनको तस्वीर पोस्ट गरेपछि उनको खुट्टाको सेतो कपडा साझेदार उठाएर लेखे: "तिमी मेरो जीवनको प्रेम हौ!"।
अर्को सार्वजनिक स्नेहमा, रेइकले पोस्ट गरे: "म तपाईलाई मात्र होइन कि तपाईं को लागि मात्र माया गर्नुहुन्छ तर मेरो लागि जब म तपाईंको साथमा छु। "
Virgil van Dijk Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बालबालिका पहिले राष्ट्रिय टोली
दम्पतीले आफ्नो पहिलो बच्चा 2014 मा थियो: एक छोरी जसले भाइगिललाई तल प्यानमा देखेर धेरै मनपर्छ।
Virgil उनको छोरीलाई आकाश माथि टसेको छ
उनीहरूको बच्चाको जन्म निकै घटना थियो। यसबाहेक रिक्क सितंबर 2014 मा भएको थियो, वान डिज, अन्तिममा, त्यो निमन्त्रणा पाए नेदरल्याण्ड्स राष्ट्रिय फुटबल टोली उसले धेरै हर्षित भएको थियो। साथै, डिफेंडर अझै पनि आफ्नो छोरीको जन्म को सम्झना गर्न चाहँदैनन्। त्यसो भए उसले के गरे? ...
Virgil आफ्नो प्रेमिका को लागि समय मा पहिले आफ्नो छोरी को जन्म दिन को लागि व्यवस्थित। यो प्रशंसकहरू द्वारा पनि आलोचना गरिएको थियो नेदरल्यान्ड्स कोच, Guus Hiddink जसले उनलाई भनिन्छ।
अनावश्यक छनौट गर्नु, उनको साथमा नैसिस उठ्यो। Guus Hiddink ले उनलाई नामित प्रत्याशित मिलान को लागी नहीं चुने।
Virgil van Dijk Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उनको केटी मा धोखा
यो पुष्टि भएको थियो कि विगिल वान डुजी एकपटक रिकमा धोका दिएपछि उनी गर्भवती भए। उनले कथित रूपमा जर्जी लियो मोनिजलाई उनको साथ सुत्न दिए।
जर्जी डच ऐस भ्यान डिजको साथ घटेपछि पार्कहेडमा साथी राइक्स नुइटेटेडगल्टसँग केल्टिकको लीग खिताब विजयी भयो।
जर्जी भेट्टाउनका विचारहरू जसले आफ्नो ट्राफी उत्सवको समयमा समयमा रिकीसँग समय बिताएपछि मेरो दिमाग भरियो। एक स्रोतले बताए कि जोडी जोडी दिन सम्पर्कमा थिए अघि जेबिलान्ट केल्टिक टोलीले चाँदीका ढोकाहरूमा हात हान्यो।
प्रेम रस Virgil र जर्जी निम्न Cheat पाठ थियो जब तिनीहरू एक सहमत होटल मा भेट्न।
निम्न फोटो देखा पर्यो जुन पहिले देखि नै र पछि प्रकट भएको थियो, आफैलाई होटलको बेडमा परिष्कृत गर्दछ।
यो जर्जी लियोल थियो जसले उनको जीवनको जीवन परिवर्तन गर्न निर्णय गरे पछि उनलाई छोड्ने निर्णय गरे। यो नर्सिङ अध्ययन गर्नको लागि एक विश्वविद्यालय प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि भयो।
उनको शब्दहरुमा ...: "मलाई नर्सिङ डिग्रीको लागि स्वीकार गरिएको छ। नर्सिङ केहि चीज हो जुन मैले सधैँ गर्न चाहन्छु। जब म जवान हुनुहुन्थ्यो, म वयस्क उद्योगमा बिस्तृत छु। म यो लगभग पाँच वर्षको लागि थियो - तर मैले मेरो प्रणालीबाट सबै कुरा पाएको छु "
उनले जारी राखेका थिए ... "अब म वास्तवमा टाउको तल पुग्छ र सब्स्न सिक्न चाहन्छु, डिग्री पाउँछु र सार्थक केहि गर्दैछु।"
यसको पछि उनको उनको सामाजिक मीडिया खाताहरु लाई हटाना। उनले भनेरहेकी थिईन कि उनको रिस अफ छैन
उनको अचेल अतीत र Virgil भेट्न पनि।
डचम्यान पकडने पछि उनले भने कि उनले उनको खाताबाट उनीहरुलाई दावी गरेका थिए
एक मित्र संग थियो। यो दुई हप्ता भन्दा कम थियो पछि बेपत्ता राइकले उनलाई भनिन् कि उनी एक बच्चाको आशा गर्दै थिए। भर्खरै रिपोर्टहरू भन्छिन् कि उनी अहिले एक बदलिएको व्यक्ति हो।
Virgil van Dijk Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -एकपटक स्ट्राइकरको रूपमा खेल्दा
व्यान डीजकिको टेक्नोलोजी गुण एक पेशेवर फुटबलर को रूपमा उनको पहिलो उपस्थिति बाट प्रमाण थियो। तिनी एक पटक उनको पहिलो क्लब ग्रोनेननको लागि आकस्मिक स्ट्राइकरको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। अप्रिल4मा एडीओ डेनहाग मा एक 2-2011 विजय मा उनको टीम को नेतृत्व गरे।
उनी चाँडै नै आफ्नो प्राकृतिक केन्द्रीय रक्षात्मक स्थितिमा फर्किए, र छिट्टै विश्व फुटबलको सबैभन्दा प्रत्याशित जवान रक्षकको रूपमा आफुलाई चिन्ह लगाइएको थियो।
Virgil van Dijk Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उहाँको सबैभन्दा ठूलो पक्ष
भिरिगल भ्यान डिजकले सामना गरेको छ एंथोनी मार्शल स्कास्टा प्रिमियरशिपमा खेल्न मन परेन।
मार्शल एक पटक डिफेंडरले क्रेम्पको स्थानबाट पछाडि एकपटक वर्जिन वान डुइजलाई सहयोग गर्यो
यो होईन पछि डच डिफेंडर फ्रान्सेली द्वारा रङ्गित भएको थियो किनभने मैनचेस्टर युनाइटेडले जेएनएमएक्सएक्स-एक्सएनक्सक्समा स्टेन मैरीको जित जित्यो। मार्शल भ्यान भ्यानमा सहानुभूति लिनुभयो र म्याचको अन्त भन्दा अगाडि उनको क्रैम्प संग सहयोग गर्नुभयो।
Virgil van Dijk Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -विश्वास
भाइबिल विश्वासको ईसाई हो। उहाँले मलाई आफ्नो परिवार, प्रेमिका र मसँग माया गर्ने व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थनाको विशेष समय सिर्जना गर्दछ। यद्यपि उहाँ मुश्किलसाथ चर्च जान्छ।
उनको शब्दहरुमा ...'जब म सानो हुन्थ्यो म हरेक आइतबार चर्च जान्छु र जब म बूढो भएकी छु। तर कहिलेकाहिँ म प्रार्थना गर्छु र मलाई लाग्छ कि यो केहि कठिन समयमा मलाई मद्दत गरेको छ। '
Virgil van Dijk Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -राशिफल ट्रेट
Virgil वान Dijk क्यान्सर हो र उनको व्यक्तित्व को निम्नलिखित गुण छ;
Virgil van Dijk को शक्ति: Tenacious, अत्यधिक कल्पनाशील, वफादार, भावनात्मक, सहानुभूति, उत्तेजित।
Virgil van Dijk's Weakness: मूडी, निराशावादी, संदिग्ध, हेरफेर, असुरक्षित।
कस्तो भर्जिन वान डिजाक मनपर्छ: कला, गृह-आधारित शौकहरू, नजिकको वा पानीमा आराम, प्रियजनहरूलाई साथीहरूसँग साथीहरूसँग राम्रो खाना बनाउन मदत गर्छन्।
क्या Virgil वान Dijk नापसंद: अजनबारी, आफ्नो आमाको कुनै पनि आलोचना र व्यक्तिगत जीवनको खुलासा।
हाम्रो Virgil वान Dijk पढ्नको लागि धन्यबाद बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!